Niyad jabinta umusha kadib Columbus, OH | Caafimaadka PW
Niyad jabinta umusha ka dib Columbus, OH
Dhalashada cunug badanaa waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn uguna xiisaha badan nolosha dumarka. In kasta oo xannaaneynta cunugga cusub ay noqon karto mid lagu farxo oo lagu abaalmariyo, haddana waxay noqon kartaa mid dhib iyo walaac leh mararka qaarkood. Waxaa jira isbeddelo badan oo jireed iyo shucuur ah oo kugu dhici kara adiga kadib dhalmada.
Isbeddeladani waxay hooyooyinka cusub ku reebi karaan murugo, walwal, cabsi, ama jahwareer. Dareennadaas guud ahaan waxaa loo yaqaan "buluug buluug".
Marka dareenkaasi aanu ka tagin toddobaad gudihiisa ama laba umusha ka dib, ama astaamuhu ka sii daraan, haweeneydu waxay yeelan kartaa niyad-jabka dhalmada ka dib.
Haddii aad ka welwelsan tahay darnaanta dareennadaas ama haddii dareennadani ay socon waayaan toddobaad ama laba toddobaad kadib, waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto bixiyahaaga. Daaweynta degdegga ahi waxay kaa caawin kartaa inaad si dhakhso leh ugu soo noqoto. Fadlan wac si aad u ballansatid ballan si aad ugala hadasho mid ka mid ah arrimahan.
Waa maxay Murugada umusha kadib?
Niyad jabka dhalmada ka dib wuu ka halis badan yahay "blues blues" wuxuuna ku dhacaa 10% ilaa 20% ee hooyooyinka cusub 3 ilaa 6 bilood ee uurka ugu horeeya, laakiin ma saameyn karto hooyada ilaa sanad kadib dhalmada. Niyad jabka dhalmada kadib wuxuu dhici karaa dhalashada cunug kasta ka dib, ma ahan kaliya cunuga koowaad. Calaamadaha murugada umusha ka dib waxay la mid yihiin buluugga ilmaha, laakiin way ka xoog badan yihiin:
Xiisaha xiisaha howlaha caadiga ah
Waqti adag oo aad hurdo ama hurdo ku seexato
Hurdo ka badan intii caadiga ahayd
Walaac badan oo ku saabsan ilmaha ama midkoodna
Oohinta ama ilmada oo badatay
Waxaan dareemayaa inaadan fiicnayn
Diirad saarid la'aanta ama xusuusta
Inaad dareento qiimo-darro, rajo-la’aan ama dambi xad-dhaaf ah
Fikradaha ku saabsan dhaawaca naftaada ama ilmahaaga
Haddii aad muujiso mid ka mid ah astaamahan ama aad u maleyneyso inaad yeelan karto niyad-jabka dhalmada ka dib, waxaad u baahan tahay inaad la hadasho dhakhtarkaaga isla markiiba. Niyad jabka umusha kadib wuxuu noqon karaa xaalad halis ah, hase yeeshee waxaa lagu daaweyn karaa daawo iyo la talin. Haddii niyadjabka umusha kadib aan la daaweyn, astaamaha way ka sii dari karaan waxayna sii socon karaan in ka badan hal sano.
Cilmu-nafsiga umusha kadib
Qiyaastii 0.1% ee haweenka waxaa ku dhaca nooc ka mid ah niyad-jabka umusha ka dib oo loo yaqaan 'psychosis' dhalmada kadib. Badanaa wuxuu ku dhacaa hooyada inta u dhaxeysa 3 iyo 14 maalmood dhalmada kadib. In kasta oo xaaladani naadir tahay, haddana waa mid aad u daran oo u baahan daryeel caafimaad oo degdeg ah. Haweenka qaba cilmu-nafsiga umusha ka dib waxay leeyihiin dhalanteedyo iyo dhalanteedyo diiradda saaraya inay waxyeelleeyaan naftooda ama carruurtooda. Haweenka qaba calaamadaha iyo astaamaha cudurka dhimirka umusha kadib waxay u baahan yihiin qiimeyn degdeg ah iyo daaweyn.
Maxaa sababa murugada dhalmada kadib?
Qofna ma ogaan karo hubaal waxa sababa murugada umusha, laakiin waxay noqon kartaa isku dhafid bayooloji, cilmi nafsi, iyo / ama bulsho. Astaamaha sikastaba waxaa sababi kara isbadalada hoormoonka jirka haweeneyda mudada umusha kadib.
Siyaabaha Aad Naftaada Ugu Caawin Karto La Qabsashada
Waxaa jira waxyaabo aad sameyn kartid si aad uga caawiso naftaada inaad ka gudubto waqtigan adag ee noloshaada.
Naso! Had iyo jeer isku day inaad seexato markii ilmuhu seexdo.
Lagama filayo inaad noqon doonto “supermom”. Jooji inaad cadaadis saarto naftaada inaad wax walba sameyso; macquul noqo oo dadka kale weydiiso inay ku caawiyaan.
Raadi qof aad la hadasho oo u sheeg sida aad dareemaysid
Waqti badan ha qaadin kaligaa. Labis gasho iskuna day inaad banaanka u baxdo maalin kasta si aad u socod yar ama hawl u qabato.
Iskuday oo wax uun naftaada u samee maalin walba (akhris, jimicsi, qubeys ama fikirka).
Kaligaa waqti la qaad ninkaaga ama lamaanahaaga.
Kala hadal daryeel caafimaad bixiyahaaga waxa ku saabsan dareenkaaga iyo daaweyntaada caafimaad.
Muddada dhalmadaada ka dib waxaa laga yaabaa inay ka buuxsamaan shucuur kala duwan. Kaliya xusuusnow inay jiri doonto xilli laqabsasho sida hooyo cusub waana caadi inaad dareento murugo, cabsi, xanaaq iyo / ama walaac kadib dhalashada ilmahaaga. Tan macnaheedu maaha inaad ku guuldareysatay hooyo.
Si kastaba ha noqotee, haddii dareennadani aysan socon toddobaad ama laba usbuuc ka dib, waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto bixiyahaaga wixii ku saabsan murugada umusha ka dib. Daaweynta degdegga ahi waxay kaa caawin kartaa inaad si dhakhso leh ugu soo noqoto. Fadlan wac 614-268-8800 si aad u qabsato ballan si aad ugala hadasho mid ka mid ah arrimahan.
Dhalmada kadib "Baby Blues"
Dhalista ilmuhu badanaa waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn uguna xiisaha badan nolosha haweenka. In kasta oo xannaaneynta cunugga cusub ay noqon karto mid lagu farxo oo lagu abaalmariyo, haddana waxay noqon kartaa mid dhib iyo walaac leh mararka qaarkood. Waxaa jira isbeddelo badan oo jireed iyo shucuur ah oo kugu dhici kara adiga kadib dhalmada.
Hooyooyin badan oo cusub (60% ilaa 80%) waxay la kulmaan "blues blues" maalmaha isla dhalmada kadib. "Blues blues" caadi ahaan waxay sarreeyaan 3 illaa 5 maalmood dhalmada ka dib waxayna socon karaan dhowr saacadood ama maalmo; badiyaa, waxay ku xalliyaan 10 maalmood gudahood dhalmada ka dib. Haddii dareennadaasi aysan ka bixin ama ka sii darin, haweeneyda waxaa laga yaabaa inay qabato diiqad umusha ka dib.
Haddii aad ka walwalsan tahay darnaanta ama muddada "blues-kaaga", fadlan soo wac 614-268-8800 si aad u qabsato ballan si aad ugala hadasho mid ka mid ah arrimahan.
Maxay yihiin "Ilmaha Buluuga ah"?
"Blues blues" waxaa lagu gartaa:
Kalsooni la'aan la'aan
Siyaabaha Aad Isaga Caawin Karto La Qabsashada
Waxaa jira waxyaabo aad sameyn kartid si aad uga caawiso naftaada inaad uga gudubto "blues blues":
Gabagabada Ilmaha Blues
Muddada dhalmadaada ka dib waxaa laga yaabaa inay ka buuxsamaan shucuur kala duwan. Kaliya xusuusnow inay jiri doonto xilli laqabsasho sida hooyo cusub waana caadi inaad dareento murugo, cabsi, xanaaq, iyo / ama walaac kadib dhalashada ilmahaaga. Tan macnaheedu maaha inaad ku guuldareysatay hooyo.
Xusuusnow, sidoo kale, in haweeney kasta iyo uur kasta ay gaar tahay. Waxaad la kulmi kartaa dareemadan si ka yar ama ka yar hooyadaa ama walaashaa, ama aad uga weyn ama ka yar marka aad dhasho ilmahaaga kale.
Si kastaba ha noqotee, haddii "buluugga ilmuhu" uusan tagin toddobaad ama laba usbuuc ka dib, waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto bixiyahaaga wixii ku saabsan murugada umusha ka dib. Daaweynta degdegga ahi waxay kaa caawin kartaa inaad si dhakhso leh ugu soo noqoto. Fadlan wac si aad u ballansatid ballan si aad ugala hadasho mid ka mid ah arrimahan.
Haddii astaamaha "ciribtirka ilmaha" sii socdaan usbuuca labaad dhalmada kadib ama ka sii daraan
Haddii aad ka fikirto inaad waxyeello u geysato naftaada ama ilmahaaga
Haddii aad u baahan tahay inaad kala hadasho waxyaabaha aad ka walwalsan tahay adeeg bixiyahaaga